अन्तरिक्षमा पहिलोपटक उमारिएको साग खानयोग्य र मिठो पनि ! - Birgunj Sanjalअन्तरिक्षमा पहिलोपटक उमारिएको साग खानयोग्य र मिठो पनि ! - Birgunj Sanjalअन्तरिक्षमा पहिलोपटक उमारिएको साग खानयोग्य र मिठो पनि ! - Birgunj Sanjal
अन्तरिक्षमा पहिलोपटक उमारिएको साग खानयोग्य र मिठो पनि !
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०७:३८
एजेन्सी । अन्तरिक्षयात्रीहरुले पृथ्वी बाहिर उमारिएको पहिलो खानेकुरा सेवन गरिसकेपछि अत्याधिक उत्साह र खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘रेड रोमेन लेट्युस’ नामक साग खाँदैगर्दा उनीहरुले त्यो स्वादिष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उक्त साग उनीहरुले अन्तरिक्षमै रोपेर उमारेका हुन् ।अन्तरिक्षमा ताजा तरकारी उमार्नु अगाडि अगाडि आइस–क्रिम बनाएर खान सम्भव थियो । तर यसमा पहिलोपटक त्यहाँ रोपिएको भए पनि सागको स्वाद पृथ्वीमा जस्तै भएको उनीहरुले बताएका हुन् जबकि क्रिमयुक्त खानेकुराको स्वाद भने अन्तरिक्षमा फरक हुने गर्दछ ।
अन्तरिक्षमा साग उमार्ने सम्बन्धी रिसर्च २०१४ देखि थालिएको थियो जसको निष्कर्ष शुक्रबार ‘फ्रन्टियरर्स इन प्लान्ट साइन्स’ मा प्रकाशित गरिएको छ । उक्त अध्ययनका अनुसार अन्तरिक्षको साग स्वादिष्टका साथै पूर्ण रुपमा सुरक्षित पनि रहेको स्पष्ट भएको छ । २०१४ मा नासाले सागसब्जी उत्पादनका लागि पहिलोपटक सामग्री र उपकरणहरु स्पेस स्टेसन पुर्याएको थियो । तर त्यतिबेला उमारिएका साग जमेपछि रिसर्च असफल भएको हो । तापनि उत्पादित बिरुवालाई परीक्षणका लागि पृथ्वी पठाइएको थियो जसमा साग खानका लागि सुरक्षित रहेको पत्ता लागेको हो । त्यसपछि नै हरिया सागसब्जीहरु स्पेस स्टेसनमा उमार्ने काम सुरु भयो ।
यसमा उक्त रोमेनियन साग, अन्तरिक्षयात्रीहरुका लागि पोषणको राम्रो स्रोत र रोग लगाउन सक्ने किटाणुमुक्त पनि भएको पाइएको थियो ।यसरी नासाले भविष्यमा लामो दुरीको मिसन तय गर्दा यस किसिमका स्पेस स्टेसनमै उत्पादन गर्न मिल्ने खाद्यान्नको महत्व अधिक हुने क्रिस्टिना बताउँछिन् जो फ्लोरिडास्थित नासाकी अनुसन्धानकर्ता हुन् । यसअघि अन्तरिक्षयात्रीहरु विशेष रुपमा प्याक गरिएका खानेकुरामा निर्भर रहँदै आएका थिए । जसमा ड्राइ फ्रुट, पिनट बटर, कुखुराको मासु लगायत हुने गर्दथ्यो ।
तर सागसब्जीको सलाद भने सेवन गर्न पाइँदैनथ्यो । यस्तोमा प्याक गरिएका खानेकुरामा भिटमिन सी, बी१, भिटमिन के लगायतका केही अति जरुरी पोषण तत्वहरु समयअनुसार हराउँदै जान्छन् । जसकारण पनि ताजा उत्पादन सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने वैज्ञानिकहरुको निष्कर्ष थियो । यस्तोमा चन्द्रमा, मंगल ग्रह लगायतको लामो मिसनमा अब अन्तरिक्षयात्रीहरुले खानाका लागि पृथ्वीमा निर्भर रहनु नपर्ने सम्भावना खुलेको नासाले बताएको छ । यसरी स्पेस स्टेसनको सागसब्जी बगैँचामा ६ वटा बिरुवासम्म उमार्न सकिने नासाको भनाइ छ ।
यसमा सबै बीउहरु स्टेरिलाइज गरिएको हुन्छ भने माटोका रुपमा विशेष ‘पिलो’ को प्रयोग गरिन्छ । ती पिलोमा मल पनि हुन्छ जसले बिरुवाको जरासम्म पर्याप्त पोषण र पानी पुगेको सुनिश्चित गराउँछ । त्यसैगरी एउटा फ्यान पनि जडान गरिएको हुन्छ जसले हावालाई सबैतिर बराबरी फैलिन मद्दत गर्दछ । हालसम्म त्यसमा तीन प्रजातिका सागहरु उत्पादन गरिएको छ – चाइनिज बन्दा, मिजुना तोरी, रसियन केल । यी सागहरु उम्रिसकेपछि सिधै टिपेर खान सकिन्छ तर हालसम्म तिनलाई स्पेस स्टेसनमै पकाउने तरिका भने पत्ता लागेको छैन । २०१४ देखि १६ का बीच गरिएका केही अनुसन्धानमा पृथ्वीको तुलनामा स्पेस स्टेसनका बिरुवामा ‘पोटासियम, सोडियम, फस्फोरस, ससल्फर र जिंक’ पदार्थहरु उच्च मात्रामा हुने गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै टमाटर, स्याउ लगायतका खानेकुरामा पनि फेनोलिक्सको मात्रा जमिनमा भन्दा उच्च हुने गरेको पत्ता लागेको थियो । सो पदार्थमा इन्फ्लामेटरी, क्यान्सर र एन्टिभाइरल विरुद्धको गुण हुन्छ । त्यसैले पनि अन्तरिक्षमै उत्पादित तरकारीको धेरै महत्व हुने बताइएको हो । सीएनएनबाट